Machine Vision Sensor လုပ်ငန်း Sincevision သည် B + Round Financing ပြီးဆုံး သည် - Pandaily
Machine Vision Sensor လုပ်ငန်း Sincevision သည် B + Round Financing ပြီးဆုံး သည်
Feb 14, 2022, 16:43ညနေ 2022/02/14 23:29:13 Pandaily
စက် ရူပါရုံ အာရုံခံကိရိယာ ကုမ္ပဏီ Shenzhen Xinjieshi Technology Co., Ltd. သည်သန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ သော ယွမ် B + ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ကိုရရှိ ခဲ့သည်။ အဓိက ပူးတွဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများမှာ Matrix Partners နှင့် GL Ventures နှင့် Industrial Capital တို့ဖြစ်သည်။ ရန်ပုံ ငွေများကို အဓိကအားဖြင့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အသင်း တိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်ကုန် လိုင်း မြှင့်တင်ရေး အတွက်အသုံးပြုသည်။
2014 ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Sincevision ထိုကဲ့သို့သော စက် ရူပါရုံ ကို, 3D algorithm ကို, optical ပုံရိပ်, ဟာ့ဒ်ဝဲ အရှိန်, တိကျစွာ တိုင်းတာခြင်း အဖြစ် အဓိက နည်းပညာ များ အပေါ်အခြေခံပြီး, စက်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် 3D တိကျစွာ တိုင်းတာခြင်း အာရုံခံကိရိယာ ၏ R & D ကိုအာရုံစိုက် ။ ထုတ်ကုန် လိုင်း (၃) ခု ပြီးစီး ခဲ့ပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ် မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ လိုင်း လေဆ ာ၊ အမှတ် လေဆာ နှင့် အမှတ် ရောင်စဉ် ။
ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန် များသည် 3C, lithium batteries နှင့်အခြား စက်မှု ထုတ်ကုန်များ ကိုရှာဖွေ တိုင်းတာ ရာတွင် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ Sincevision သည် ထုံးစံ အတိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ မြန်နှုန်းမြင့် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ ခြင်းတို့ကြောင့် လူသိများသည်။
Sincevision သည် လေဆာ မှန်ဘီလူး ၊ ပုံရိပ် မှန်ဘီလူး နှင့်အလွန် မြန် သော အချက်ပြ အပြောင်းအလဲ များ တွင်အဓိက နည်းပညာ များကိုစုဆောင်း ထားသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် နှင့်အ ရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု အတွက် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် စမ်းသပ်မှုနှင့် စံကိုက်ညှိ ကိရိယာများကို ဒီဇိုင်းဆွဲ ပြီး တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤနည်း အားဖြင့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် စက် တစ်ခုလုံး၏ ရှေ့နောက် ညီညွ တ်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံ သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:မိုဘိုင်း စက်ရုပ် ထုတ်လုပ်သူ SEER သည် Round B ရန်ပုံငွေ ရရှိ သည်
ကုမ္ပဏီ ၏အဆိုအရ SinceVision ၏ ဖောက်သည် များသည် OPPO, Vivo, Huawei, Foxconn, CATL, BYD စသည့် 3C, မော်တော်ကား lithium ဘက်ထရီ နှင့် photovoltaic နယ်ပယ်များတွင် ပင်မ ကုမ္ပဏီ များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Sincevision သည် ရထားလမ်း ဖောက်လုပ် ခြင်း၊။ ၎င်း၏ ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀၀% ကျော် တိုးတက်ခဲ့သည်။
Changmugu Medical သည် CICC Capital, IDG Capital နှင့် CDH VGC တို့ ဦး ဆောင်သော Round B ရန်ပုံငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၄. ၃ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်
အရိုး အထူးကု အသိဉာဏ် ခွဲစိတ် မှုအတွက် အလုံးစုံ ဖြေရှင်းချက်ပေး သူ Beijing Changmugu Medical Technology သည် မကြာသေးမီက Round B ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ယွမ်သန်း ၅ ၄၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၄. ၃ သန်း) ရရှိ ခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
Industry Nov 11 နိုဝင်ဘာ 11, 2021
XSky သည် round F ရန်ပုံငွေ အတွက်ဒေါ်လာ ၆၂. ၈ သန်း ရရှိခဲ့ပြီး Source Capital သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုတွင်ပါ ၀ င်သည်
Software Definition Infrastructure Products and Services ကို အဓိက ထားသည့္ တ႐ုတ္ အေျခစိုက္ နည္းပညာ ကုမၸဏီ XSky Data Technology က F Round Financing ကို ယြမ္ သန္း ၄၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ ဒသမ ၈ သန္း) ရရွိၿပီး စီး ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။